Tattoos qurux badan oo qurux badan, marka cabirku uusan macno lahayn | Tattoo
Iyada oo xulashadan tattoos qurux badan yaryar waxaa la muujiyey in cabbirka, markaan ka hadlayno khadadka, marar badan macno malahan, iyo inaan ku guuleysan karno naqshad qurux badan oo ku jirta cabbirka yar.
Hadday fudud yihiin, faahfaahsan yihiin, madow iyo caddaan ama xoogaa taabasho midab ah, xagga hoose waxaad ka heli doontaa fikrado badan oo lagu gaaro tattoo horyaal, oo lagu daray tilmaamo dhawr ah oo maskaxda lagu hayo. Akhriso si aad u ogaato!
1 Talooyin ku saabsan tattoo-gaagu inuu noqdo mid hagaagsan
1.2 Aagga in lagu sawiro
2 Immisa ayey le'eg tahay tattoosyada yaryar?
3 Fikradaha qaar ka mid ah tattoos aad u qabow
3.1 Tattoo Minis origami
3.2 Tattoos faahfaahsan
3.3 Tattoo xoolaha
3.4 Tattoo dhir
3.5 Tattoo xiddig
3.6 Tattoo-ka oo leh taabashada biyo-biyoodka
3.7 Erayada iyo odhaahda tatuu
3.8 Tattoo farta
Talooyin ku saabsan tattoo-gaagu inuu noqdo mid hagaagsan
Kahor intaanan ku siinin farabadan fikradaha aan diyaarinay, aan ka hadalno Tilmaamaha qaarkood inay waxtar leedahay in maskaxda lagu hayo noocan ah tattoos-yada:
Dabiici ahaan, Marka aan ka hadlayno tattoosyada yaryar, cabirku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga fiirsado ka hor intaadan tallaabada weyn qaadin.. Waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad kala hadasho farshaxankaaga tattoo, maxaa yeelay wuxuu ogaan doonaa hubaal haddii aaggu yahay mid la taaban karo, haddii naqshadda la qiyaasi karo…. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la ogaado:
Naqshadaha qaarkood way ka bixi karaan kuwo waaweyn ilaa kuwo aad u fudud (tusaale ahaan, dadka qabyaaladda). Qaar kale ma qirtaan inay sii yaraanayaan ama ay leeyihiin natiijooyin ka xun (tusaale ahaan, kuwa runta sheegaya).
Heerka faahfaahinta, xaaladaha badankood, waa inay noqdaan ugu yaraan si markaa ay ugu ekaato sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah waxayna ka hor istaageysaa tatuuqa inuu lumiyo tafaasiil iyo murugo waqti kadib.
Aagga in lagu sawiro
Aagga aan dooneyno inaan ku sawirno ayaa ah mid ka mid ah tixgelinta aan tixgelin siin doonno sidaa darteed, marka hore, Tattoo-ga ayaa loo qaddariyo si habboon iyo, tan labaad, in ay sii jirto inta ugu macquulsan. Sidaas in:
Meelaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay tatooyada yaryar ee qurxoon ayaa ah gacanta hore, aagga gudaha ee biceps, gacanta, naaska, qoorta, dhegta iyo anqawga gadaashiisa.
Ka fogow meelaha aadka u waaweyn sida dhabarka. Kaliya uma eegi doonto inay ka yartahay sida dhabta ay tahay, waxay xannibi kartaa barta qaybtaada xigta.
Maskaxda ku hay in meelaha sida gacmaha iyo cagaha ay leeyihiin maqaar kala duwan oo aad loo isticmaalo, sidaas darteed Tattoo-ka aagagani waxay u muuqdaan kuwo si fudud u xoqa.
Immisa ayey le'eg tahay tattoosyada yaryar?
Hore ayaan uga hadalnay mowduucan munaasabadaha kale ee kujira mareegta, laakiin waxaa mudan in laxasuusto taas Tattoo-guhu badanaa waxay leeyihiin qiime ugu yar. In kasta oo aakhirka farshaxanyahanku uu ku qaato shan daqiiqo oo kaliya taatikadaada, waqtiga ay qaadanayso in wax walba la diyaariyo (khadka, qolka, cirbadaha, iwm.) Wuxuu la mid yahay gabal weyn
Qiimaha ugu yar wuxuu ku kala duwanaan karaa farshaxanka tattoo ilaa farshaxanka tattoo. Fikrad ahaan, waa inaad isbarbar dhigtaa inyar (adigoo adeegsanaya shabakadaha bulshada, laakiin sidoo kale adigoo booqanaya dukaankooda) ugu dambeyntiina dooro midka aad ugu jeceshahay.
Fikradaha qaar ka mid ah tattoos aad u qabow
Hadda haa, hoosta waxaan ku soo bandhigeynaa taxane ah fikradaha kugu dhiirrigeliya nashqaddaada soo socota.
Tattoo Minis origami
Mid ka mid ah naqshadaha sida ugu fiican ugu shaqeeya qaybaha yaryar waa origami. Farshaxanka waraaqda isku laaban ee Jabbaan ayaa kuu oggolaaneysa naqshad aad u nadiif ah oo joomatari ah, taas oo xitaa aad ku dari karto dhowr dhibic oo midab leh.
In kasta oo aan mar hore kugula talinay inaadan dooran naqshadaha faahfaahsan, runta ayaa ah in mararka qaar xeerarka la iska indhatirayo. Iyada oo leh farshaxan khibrad leh, waxaan ku guuleysan karnaa naqshad siineysa aragti ah in la faahfaahiyo iyadoo lagu ciyaarayo hooska, aragtida iyo midabka.
Xayawaanada qaar ayaa iska amaahda gaar ahaan inay u noqdaan dhiirrigelin astaamo yar yar oo qurux badan sababta oo ah qaabkooda astaamaha ah. Waxaan ka hadleynaa kuwa jilicsan sida flamingos, giraffes, libaaxyada, maroodiyaasha, qoolleyda, nibiriga ...
In kasta oo dhirta oo dhan, oo leh khad fudud oo jilicsan, ay si aad u wanaagsan ugu shaqeeyaan astaamaha yaryar, runta ayaa ah in dhirta duurjoogta ay amaahdaan naftooda gaar ahaan. Dhirta khafiifka ah ee jilicsan sida violets, lavender ama thyme waa kuwo aad iyo aad ugu fiican naqshadaha yaryar.
In kasta oo xiddigta baddu ay tahay mid aad u qabow iyada oo aan loo eegin cabirkeeda, haddana astaantan yar yar ee loo yaqaan 'tattoo' ugu fiican ayaa ku habboon waa koox-kooxeedyada. Xarrago, ganaax iyo, wixii ka sarreeya, yar, waxaad leedahay waxyaabo badan oo aad ka soo qaadan karto dhiirrigelin, mid kasta oo leh halyeey u gaar ah.
Tattoo-ka oo leh taabashada biyo-biyoodka
Tattoo-yada yaryar ee quruxda badan ayaan la jaan qaadi karin midabka, iyo midab-biyoodka, oo leh dhawaaqa dhawaaqa iyo dhejiska u eg, ayaa ku habboon qaab fudud oo qurux badan. Isku dar midabka waxyaabo kale sida baalal, dayax, hirarka ...
Erayada iyo odhaahda tatuu
Mid kale oo ka mid ah nashqadaha suurtagalka ah ee noocan ah tattoos-yada ayaa ah kuwa ay ku jiraan ereyo ama weedho (sida iska cad waa naqshadaha xoogaa waaweyn). Khiyaamada dhabta ahi ma aha oo kaliya xulashada erey ama weedh wanaagsan, laakiin sidoo kale ogaanshaha sida loo doorto font ee warqadda.
Hagaag, horaan kuu sheegnay in faraha lagugu sawiro ma ahan fikrad fiican, laakiin haddii aad rabto gabal meeshaas haa ama haa, ka dooro qaybta kore ee faraha, halkaasoo naqshadeynta ay u badan tahay inay sii dheeraato.
Waxaan rajeyneynaa inaan ku siiney fikrado badan mustaqbalkaaga yar ee jilicsan. Noo sheeg haddii aad wax ku leedahay faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh qaabab » Tattoos qurux badan oo qurux badan, marka cabirku uusan macno lahayn
Tattoo Pinocchio, xiisaha iyo dhiirigelinta caruusadan